Prostitute နှင့် ကာမေသု… | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 7/19/2010 12:30:00 PM
ှQ. ဘုန်းဘုန်း ဘုရား…
ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေကြောင်း ဦးစွာ မေတ္တာပို့သ လိုက်ပါတယ်ဘုရား..။ တူတော်မောင် တယောက်က အောက်ပါအတိုင်း မေးထားပါတယ် ဘုရား...
ဦးဇော်လင်းရေ...နောက်တခုက ဘုန်းကြီးကို သွားလျှောက်ရင် တခုလောက် လျှောက်ပေးပါ။ အဲဒါက prostitute တွေနဲ့ သံဝါသ ပြုရင် ကံထိုက်၊ မထိုက်လေ။ ဒီလိုဗျာ... မိန်းမတွေက ခင်ပွန်းရှိသားနဲ့ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ပိုက်ဆံရှာတယ်။ အဲဒါ လာဆက်ဆံတဲ့ သူတွေဆိုရင် အခကြေးငွေယူပြီး ဆက်ဆံကြတယ်လေ။ အရောင်းအ၀ယ်ဆိုတော့ဗျာ ဒု၊သ၊န၊သော ဆိုတာမည်၊ မမည်ပေါ့။ ထိုက်ရင်လည်း ဘာကြောင့်လဲ? မထိုက်ရင်လည်း ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာပါ။
***မေတ္တာရှေ့ထားလို့ ဖြေကြားပေးပါ..ဘုရား။ Post တင်လို့ကောင်းတဲ့ အမေးဆိုရင်လည်း၊ လူငယ်များအတွက် အကျိုးများပါတယ်ဘုရား။
A. ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဟာ ကာမဂုဏ်မှာ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ပြုခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကို အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးသူများ အနေနဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်လင်ယောက်ျား၊ ဇနီးမယားကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနဲ့ ကာမဂုဏ်မှီဝဲရင် ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပဲ အလွယ်မှတ်ထားလိုက်ရင် ရှင်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အလွတ်အမျိုးသား၊ အများသမီးများ အနေနဲ့ကတော့ ကာမဂုဏ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့အကျင့် မဖြစ်စေဖို့ ကာမဂုဏ်မမှီဝဲ မသွားလာသင့်တဲ့ မိန်းမ၊ ယောက်ျားများကို သိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမျိုးသားများ မသွားလာအပ်တဲ့ အမျိုးသမီး အယောက် (၂၀)နဲ့ အမျိုးသမီးများ မသွားလာအပ်တဲ့ အမျိုးသား အယောက် (၁၂) ယောက်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို စာပေက အဂမနီယ၀တ္ထုလို့ ဆိုပါတယ်။ အဂမနီယဆိုတာ မသွားလာအပ်တာကို ပြောတာပါ။
ဒီ ၀တ္ထုတွေက (၁) အမိစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၂) အဘစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၃) အမိ အဘစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၄) မောင်ကြီးမောင်ငယ် စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၅) အစ်မ ညီမ စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၆) ဆွေမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့ မိန်းမ၊ (၇) အနွယ်တူစောင့် ရှောက်တဲ့ မိန်းမ၊ (၈) တရားကျင့်သုံးဖက် စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ။ (ဒီမိန်းမရှစ်မျိုးက ကာမပိုင်မရှိတဲ့ အပျိုစဉ်မိန်းမများဖြစ်ပါတယ်။) (၉) စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးမိန်းမ၊ (၁၀) လက်မထပ်ရန် မင်းအမိန့်အာဏာဖြင့် တားမြစ်ထားတဲ့မိန်းမ၊ (၁၁) ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၂) ယောင်္ကားတစ်ဦးဦးနဲ့ အလိုတူ၍ အတူနေတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၃) စည်းစိမ်ပေးပြီး မယားပြုလုပ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၄) အ၀တ်ပုဆိုးပေးပြီး မယားပြု ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၅) ရွှေခွက်မှာ လက်စုံချပြီး ယောင်္ကျားနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၆) ခေါင်းရွက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းမရွက်စေဘဲ သိမ်းယူထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၇) ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမ၊ (၁၈) အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမ၊ (၁၉) စစ်မြေမှ ဆောင်ခဲ့တဲ့ သုံ့ပန်းမိန်းမ၊ (၂၀) တစ်ဦးဦးရဲ့ ခေတ္တမယားဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမ (ဒီမိန်းမ(၁၂)ဦးကတော့ ကာမပိုင်ယောင်္ကျားရှိတဲ့ မိန်းမ များဖြစ်ပါတယ်) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် ၁မှ ၂၀အထိ မိန်းမများဟာ အမျိုးသားများအနေနဲ့ ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာ မမှီဝဲ မသွားလာအပ်တဲ့ မိန်းမများဖြစ်ပြီး အမှတ် ၉မှ ၂၀အထိ ၀တ္ထုများမှာ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးယောက်ျား စသဖြင့် မိန်းမများ နေရာတွင် ယောက်ျားလို့ အစားထိုးပြီး ဒီ (၁၂)ယောက်က အမျိုးသမီးများ ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာ မမှီဝဲအပ်တဲ့ ယောက်များများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အရွယ်ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမများအနေနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေ ရှိရာမှာ ယောက်ျားလေး အနေနဲ့ အမျိုးသမီးက လွတ်လပ်သူ ဖြစ်နေပေမယ့် အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးဦး ရှိနေတဲ့အတွက် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဖြစ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီး အနေနဲ့ ဒီသိက္ခာပုဒ်အရ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးများ အနေနဲ့ လောကကြောင်းအရ ကြည့်ရင် အပြစ်ရှိနိုင်တာကိုတော့ သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် အိမ်ထောင် မပြုရသေးပေမယ့် နှစ်ဘက်မိဘ သဘောတူထားရင်တော့ နှစ်ဦးလုံးမှာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်ဘူးလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မေးခွန်းရှင် မေးထားသလို prostitute နဲ့ ကာမဂုဏ်ကိစ္စ သွားလာရင်ကော ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဖြစ်မဖြစ်ဆိုရာမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေ အနေနဲ့ကတော့ တရားဝင် ကာမပိုင် လင်ယောက်ျား၊ ဇနီးမယား ရှိပြီး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကာမပိုင်က ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ သဘောတူ ခွင့်ပြုရင်တော့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားလက်ထက်က ဥတ္တရာအမည်ရှိတဲ့ သောတာပန် အမျိုးသမီးဟာ (၇)ရက်ပတ်လုံး ဥပုသ် စောင့်ထိန်းလိုတဲ့အတွက် လင်ယောက်ျားနဲ့ အတူနေထိုင်ပေးဖို့ သီရိမာ ပြည့်တန်ဆာမကို အခပေးပြီး နေစေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုကြည့်ပြီး ကာမပိုင်က ခွင့်ပြုရင်တော့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချမိလို့ပါ။ နောက် အိမ်ထောင်ကျပြီးပေမယ့် မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ ဖြစ်နေသူများ၊ တရားဝင် တစ်ခုလပ်ဖြစ်နေသူများနဲ့ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အလွတ်ယောက်ျားတွေ အနေနဲ့တော့ ဒီ prostitute ဟာ အုပ်ထိန်းသူ ရှိမမရှိ၊ အုပ်ထိန်းသူက သဘောတူ ခွင့်ပြုထားတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ ကာမပိုင် လင်ယောက်ျား ရှိမရှိ၊ ပြီးတော့ တရားဝင် prostitute ဟုတ်မဟုတ် အပိုင်းတွေ အထိ စဉ်းစားဖို့ လိုလာပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူမရှိ၊ ဒါမှမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူက သဘောတူပြီး ကာမပိုင်ရှိပေမယ့် ကာမပိုင်က ခွင့်ပြုထားတဲ့ prostitute ဆိုရင်တော့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ အဲဒီ prostitute ဟာ ကိုယ့်အရင် တစ်ခြားသူကို လက်ခံထားပြီး အရင်လူနဲ့ ကိစ္စမပြီးပြတ်သေးဘဲ ရှိနေရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဒီ prostitute အလုပ်ဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသမီး ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အစိုးရရဲ့ တားမြစ်မှု စတာတွေကြောင့် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်နေရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အုပ်ထိန်းသူ၊ မိဘဆွေမျိုးများ မသိရအောင်၊ တရားဝင် အိမ်ထောင်ဖက်များ မသိရအောင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုးလုပ်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို prostituteတွေဟာ လက်မှတ်ရများ မဟုတ်သလို၊ အုပ်ထိန်းသူနှင့် ကာမပိုင်များက ခွင်ပြုထားတာတွေလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ပိုက်ဆံပေးပြီး သွားလာတဲ့အပိုင်းမှာ အထူးသတိပြု ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ခွင့်မပြုလို့ တရားမ၀င် လုပ်နေရပေမယ့် အုပ်ထိန်းသူများ၊ ကာမပိုင်များက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုထားရင်တော့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ မေးခွန်ရှင် မေးထားသလို စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်စားရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးများနဲ့ ပိုက်ဆံပေးပြီး သွားလာတဲ့အပိုင်းမှာ (၁) အချက်က ဒီအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် အိမ်ထောင်ရှိနေတာက တစ်ကြောင်း၊ (၂)အချက်က အရောင်းအ၀ယ် ဆိုပေမယ့် အုပ်ထိန်းသူနဲ့ ကာမပိုင် ရှိသူ ဖြစ်နေပြီး ကာမပိုင် လင်ယောက်ျားက ခွင့်ပြုချက် ရှိမရှိ မသိရတာကတစ်ကြောင်း စတဲ့စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဒီကာမေသု မိစ္ဆာစာရ အဖွင့်တွေအရ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံထိုက်နိုင်တယ်၊ ကံမြောက်နိုင်တယ်၊ ဒု၊ သ၊ န၊ သော ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားလာတဲ့ ယောက်ျားက မသိလို့ မှားမိတဲ့အခါ အပြစ်မရှိနိုင်ပေမယ့် အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကာမပိုင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိပါတယ်။ ကာမပိုင် လင်ယောက်ျားက တရားဝင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုထားရင်တော့ အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အမျိုးသမီး prostitute တွေနဲ့ သွားလာတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ယောက်ျားများအနေနဲ့ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေက ဒီအလုပ်လုပ်တာကို သဘောတူ ခွင့်ပြုထားလို့ သွားလာတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (ကျမ်းညွှန်းများ = ပါရာဇိကဏ်ပါဋ္ဌိ တော်(၀ိ ၁၊ ၂၀၂) (မ-ဋ္ဌ ၁၊၂၀၃။အဘိ-ဋ္ဌ ၂။ ပဋိသံ-ဋ္ဌ ၁၊ ၂၀၄)
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မေးခွန်းရှင်အမေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်အသင့် ပြည့်စုံလိမ့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဖြေဆိုထားတာတွေဟာ ဗုဒ္ဓခေတ် အခြေအနေအရ သတ်မှတ်ချက်တွေကို အဋ္ဌကထာက ပြန်ဖွင့်ပြပေးထားတာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ခေတ် အခြေအနေနဲ့တော့ အားလုံးတစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိတို့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဆင်ခြင်မှုနဲ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အိမ်ထောင်မပြုမီ အချိန်မှာလည်း ကာမဂုဏ်ကိစ္စကို လူအချင်းချင်း လက်တွေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး ဖြေရှင်းတာထက် ဒီစိတ်ကို တစ်ခြားအာရုံ၊ တစ်ခြားနည်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယား၊ လင်ယောကျာ်းနဲ့ပဲ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုနေနိုင်ရင်တော့ လောကကြောင်းအရလည်း အပြစ်မဖြစ်နိုင်သလို၊ ဓမ္မကြောင်းအရလည်း အပြစ်ကင်းစင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာမရာဂစိတ်ဆိုတာ ဒီစိတ်ထကြွတဲ့ အချိန်လေးလောက်ပဲ ပူလောင်နိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအခိုက်အတန့်ကို တစ်ခြားအာရုံ၊ တစ်ခြားနည်းနဲ့ ဖြေရှင်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန်၊ သံသရာနှစ်ဖြာ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ အကြံကောင်းပြုလိုက်ပါတယ်။